Akafa achitema muti unoyera | Kwayedza
15 Mar, 2019 - 00:03	 2019-03-14T20:48:21+00:00 2019-03-15T00:06:33+00:00 0 Views
MURUME wekushora nekuzvidza tsika dzechivanhu kuChiweshe – uyo akatema hunde yemuti unonzi waiyera – ari kunzi akangopunzika ndokufa pakarepo panguva imwe cheteyo yakadonha muti waaitema uyu. Mashura aya anonzi akaitika mubhuku raMusundasora, kuChaona, pasi paMambo Makope, uko kune murume ainzi Smith Maninyu ari kunzi akakwira mugomo ndokunotema muti wemuunze uyo unonzi waiva nechivanhu sezvo wainoteurirwa midzimu nevakuru vemunzvimbo iyi.
Inspector Milton Mundembe, avo vanova mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police mudunhu reMashonaland Central, vanotsinhira nyaya yemurume akadonha akafa apo achitema muti.
“Nyaya yemurume akadonha achitema muti yakasvika kumahofisi edu. Zvekufa tinozvizviva asi kuti zvinozofambirana nechivanhu isu hatingazive,” vanodaro.
Mambo Makope VaJacob Mapirinjanja vanotsinhirawo nyaya inoshamisa iyi.
“Murume ainzi Smith Maninyu akanokwira mugomo redu rinoyera ratinoti Gomo Dzvuku umo akanotema muti wemuunze waiyera zvikuru pachivanhu chedu kuno. Muti uyu wakanga wasara woga pamusoro pegomo panova panoitirwa chivanhu chose kureva kuti mabasa ose emhondoro ainopotera pamuti uyu.
“Muti uyu pawakanopunzika, iyewo murume uyu akabva anopunzikira nekune rimwe divi rakapesana nekwawakawira – muti uchienda kwawo iyewo achinoti kunguva kufa nekwakewo. Akanorovera negotsi richibva raputika ndokubuda ropa achibva afira ipapo,” vanodaro Mambo Makope.
Manenji aya aitika, Sabhuku Marshal Musundasora vanonzi vakazonozivisa Mambo Makope nezvenyaya iyi zvikaitawo kuti mambo ava vanozvionera voga.
“Ndakanowana mutumbi wemurume uyu wakawira kwawo, hunde yemuti yakawirawo kune rimwe divi. Ropa raiva pamutumbi uyu raikwanisa kuzara kana marita 20 chaiwo izvo zvakandishamisa kuti rakabva kupi.
“Nyaya iyi takazoisvitsa kumapurisa, mutumbi wemufi ndokutorwa ukaendeswa kumochari uko wakanoongororwa namachiremba,” vanodaro.
Mambo Makope vanoti muti uyu “ndiwo waiva wakamonerwa nemhepo dzose dzenzvimbo ino zvose nemashavi edunhu”. Vanoti murume wekufa uyu aitotema vanhu iye achifunga kuti aitema muti.
“Ropa remurume uyu rakayerera kunosvika pasi pegomo – kuita sezvinonzi imvura. Pakatakurwa mutumbi wake, wakangoramba uchibuda ropa kusvikira nepawakadzoswa kubva kumochari yechipatara chekuBindura District Hospital. Rimwe reropa rakazotorwa kwaakafira ndokuvigwa naro,” vanodaro mambo ava.
Hama dzemushakabvu dzinonzi dzakazoshevedzwa kudare raMambo Makope dzikaripiswa mombe mbiri dzekutyora chivanhu chedunhu kwaakaitwa nemumwe wavo.
“Svondo rapera, mhuri yemufi takaishevedza kudare vakabvuma mhosva yekuti nyakufa akakanganisa chivanhu, dare ndokuvaripisa mombe mbiri,” vanodaro.
Vanoti kuripisa hama dzemufi uyu vakada kupa mucherechedzo kune vamwe vangada kutsaudzira chivanhu.
Mudunhu iri ndimo zvakare mune muporofita, Madzibaba Tinashe Tinapi (31), uyo akamanikirwa kana kuti akamedzwa nebako riri rinoyera apo aida kutsvaga masimba ake ekuporofita ndokuzonunurwa paitwa chivanhu. Muporofita uyu akazofa mushure mekugara muchipatara kwenguva yakareba.
“Muno zvakare ndimo mune muporofita uye wekumedzwa nebako akaita mazuva arimo bako. Akatozoregedzwa kana kuti kusvipwa nebako iri mushure memazuva patoitwa chivanhu, pashure ndokuzofa.
“Tinoti chivanhu ngachiremekedzwe, tarisai tava nemitumbi miviri yevanhu vafa nekuda kwekusatevedza tsika nemagariro emuno,” vanodaro.
Mambo Makope vanoyambirawo vanhu vari kurima fodya mudunhu ravo kuti vasateme miti pose-pose sezvo vachizogumisira vatema neinoyera.
Zvichakadai, mumusha weRutendo uri mudhorobha reRedcliff, kudunhu reMidlands, mwedzi wapera kune muti wemuunze zvakare unonzi wakawiswa nemhepo asi ukazomuka woga mushure mekunge wataura uchirambidza vanhu kuuteme huni.
Votaura pamusoro penyaya mbiri dzine chekuita nemiti idzi, VaPatrick Kapfunde kana kuti Sekuru Bhaureni vekwaMadondo, kuMt Darwin, vanoti vanhu ngavasiyane nekutamba nechivanhu.